Banyere Anyị - Yangzhou Princechem Co., Ltd.
Ọ na -etinye aka na mmepe na imepụta ndị na -enye ọgwụ ọgwụ ọhụrụ
Na-etinye aka na ọrịa kansa, ọrịa obi, ọrịa uche na mpaghara ndị ọzọ
Ndị na -arụ ọrụ n'etiti ApIs
Ihe Nweta Eter
Heterocycle na -enweta
Usoro mmepụta usoro eserese
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Yangzhou Princechem Co., Ltd. dị na Yangzhou City, Jiangsu Province. E hiwere ya na 2003. Anyị bụ ọkachamara n'ịchọpụta, ịzụlite na imepụta ndị na -ere ọgwụ na kemịkalụ pụrụ iche. YPC nwere saịtị nrụpụta atọ n'ofe China, nke dị na Jiangsu, Anhui na Mongolia n'ime. Anyị nwere ụlọ ọrụ azụmaahịa na R&D na ogbe ndịda Yangzhou.
Ụdị mmeghachi omume kemịkalụ nke anyị maara nke ọma bụ etherification, ammoniation, chlorination, esterification, cyclization, hydrogenation na mmeghachi omume Grignard, wdg. N'ime afọ iri gara aga, e mepụtara ihe karịrị katalọgụ ngwaahịa 400. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e mepụtala ihe karịrị ụdị ọgwụ mgbochi iri anọ, gụnyere ọrịa kansa, akwara obi, usoro nri, ọrịa uche na mpaghara ndị ọzọ. Ọ gụnyere ndị na -agbachitere isi API dị ka Quetiapine, Fluvaxamine, Erlotinib, Gefitinib, Sunitinib, Lapatinib, Rabeprazole na Lafutidine. Ruo ọtụtụ afọ, anyị na-enye ndị na-ere ọgwụ ọgwụ dị elu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ ama ama n'ụwa.
Ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ anyị.
Usoro saịtị nkuzi anyị.
Anyị nwere akụrụngwa na akụrụngwa dị mma iji nwalee ndepụta nke ndị na -etinye ọgwụ.
Ogo: Ngwaahịa anyị ruru ụkpụrụ nchekwa MSDS ma anyị nwere ISO na asambodo ndị ọzọ ka ị nwee ike nweta ngwaahịa dị elu n'aka ụlọ ọrụ anyị.
Ahịa:Anyị bụ ụlọ ọrụ nke nwere ahụmịhe afọ 20 na ụlọ ọrụ a. yabụ anyị nwere ike ịnye ọnụahịa asọmpi na ngwaahịa dị elu maka ndị ahịa anyị.
Mbukota: Anyị nwere ike ime dịka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Ụgbọ njem: Enwere ike ibuga ngwaahịa a site na onye na -ebugharị ya, ikuku ma ọ bụ n'oké osimiri
Ọrụ: Anyị na-enye ọrụ lọjistik pụrụ iche gụnyere nkwupụta mbupụ, mkpochapụ kọstọm na nkọwa niile n'oge mbupu, ka anyị nwee ike mee ka anyị nwee ike ịnye gị ọrụ nkwụsị site n'usoro ka ngwaahịa ebuga n'aka gị.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Yangzhou Princechem Co., Ltd.
Ruo ọtụtụ afọ, anyị na-enye ndị na-ere ọgwụ ọgwụ dị elu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ ama ama n'ụwa.
Mba 413, Yangzijiang North Road, Yangzhou City (Sales Center)
Enwere ngwaahịa ọ bụla ịchọrọ?
Ngwaahịa na -ekpo ọkụ - Map saịtị - AMP Mobile
N'ihi mmetụta COVID -19, CPHI CHINA 2021 yigharịrị na 16th DEC - 18th DEC. Nabata ileta ụlọ ntu anyị, Ụlọ ntu Mba: W2C35a